5 Qof oo ku dhaawac-may qarax xalay ka dhacay isbitaalka Banaadir ee Moqdisho. – Radio Daljir
5 Qof oo ku dhaawac-may qarax xalay ka dhacay isbitaalka Banaadir ee Moqdisho.
Moqdisho, Nov, 29 ? In la ogyahay ku dhawaad 5 ruux oo isugu jira bukaan jiif, iyo dad rayid ah oo ku sugnaa gudaha isbitalka ayaa dhaawacyo kale duwan kasoo gaareen qarax xalay ka dhacay isbitalka Banaadir ee magaalada Moqdisho.
Warar is-khilaafsan ayaa illaa iminka kasoo baxaya nooca qaraxu uu ahaa, waxaana loo badinayaa inuu ahaa nooca ramuudka laga hago sida ay warbaahinta maxalliga ah ee dalka u sheegeen saraakiisha caafimaadka isbitalka Banaadir.
Dhinaca kale, saraakiisha ammaanka DFKS oo ka hadlay arrintaan ayaa tilmaamay inay gacanta kusoo dhigeen illaa dad gaaraya 4 qof, kuwaasoo looga shakiyay inay ka dambeeyeen qaraxaasi. Saraakiishu waxay hadalkooda raacsadeen inaysan u dulqaadan doonin shacab dambe oo lagu dhibaateeyo Muqdisho, isla markaana tillaabo cad oo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonaan qofkii lagu helo dambiyo la xiriira waxyeelada shacabaka.
Waa qaraxii ugu horeeyay oo lala eegto goob caafimaad, tan iyo markii ay is-daba taxnaayeen qarax-yada caadada noqday ee ka dhaca Moqdisho, waxaana arrintaan wal-wal iyo cabsi aad u daran ka muujiyay boqolaal dad ah oo ku dhaqan Moqdisho.